डा‍‍. पाण्डेको खुलासाः यी तथ्य थाहा पाए ८५ प्रतिशत संक्रमित आफैं निको हुन्छन् - Nepalese Timesडा‍‍. पाण्डेको खुलासाः यी तथ्य थाहा पाए ८५ प्रतिशत संक्रमित आफैं निको हुन्छन् - Nepalese Times
ओलीको अभिव्यक्तिबारे भाजपाका प्रवक्ताले मुख खोले, राम भारतको की नेपालको ? 21 घण्टा अघि
भोकभोकै त्रिपाल र विद्यालयमा आधा शरीर भिज्दै ५०० पीडित 23 घण्टा अघि
डा‍‍. पाण्डेको खुलासाः यी तथ्य थाहा पाए ८५ प्रतिशत संक्रमित आफैं निको हुन्छन्
डाक्टर रवीन्द्र पाण्डे८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०६:५० (1 महिना अघि) ५६४३ जनाले पढ़िसके
केही दिनअघि कोरोना सङ्क्रमणको कारण ज्यान गुमाएकी सुत्केरी महिलाको शिशु र उनको परिवारको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । यस्तै कतिपय कोरोना सङ्क्रमितको परिवारका अरु सदस्यलाई सङ्क्रमण नै भेटिएन । अनि फेरि कुनै लक्षण नै देखा नपरेका व्यक्तिमा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भयो । यसले कोरोना सङ्क्रमण कस्तो अवस्थामा सर्ने भन्ने विषयमा झन द्विविधा बढेको छ । आज म कोरोनाका केही तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दैछु ।
सङ्क्रमितको आमाबाट शिशुमा कोरोना सर्छ कि सर्दैन ?
चीन, अमेरिका, इटलीलगायत देशहरुमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि सङ्क्रमित आमाबाट जन्मिएका धेरै जना शिशुहरुमा कोरोना सङ्क्रमण नभएको पाइएको छ । आमाको पेटमा रहेको एम्नियोटिक फ्लुडपमा बच्चा घुम्ने, बस्ने गर्छ । त्यसबाट र स्तनपान गर्दासमेत कोरोना सर्दैन । आजसम्म आमाको दूधबाट बच्चालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको रेकर्ड छैन ।
अर्को प्रश्न आमासँग २४ सै घण्टा बच्चा रहँदा किन सरेन त ? भन्ने छ । यदि आमालाई एकदमै धेरै खोकी लागेको छ, बच्चातिर फर्केर खोक्ने, हाच्छ्युँ गर्ने गरिएको छ भने सर्ने सम्भावना रहन्छ । तर बच्चासँगै रहँदा पनि यी कुरामा ध्यान दिइएको छ भने नसर्न पनि सक्छ । हरेक व्यक्तिको इम्युनिटी पावर फरक–फरक हुन्छ । सुत्केरीको शिशु र उसको परिवारका सदस्यको इम्युनिटी पावरले त्यो सङ्क्रमणलाई जितेको पनि हुन सक्छ ।
नेपालमा एउटै घरमा एक जनालाई सङ्क्रमण पुष्टि हुने तर परिवारका अरु सदस्यलाई सङ्क्रमण नभएको भेटिएको छ । सनसिटी अपार्टमेन्टकै घटना हेर्ने हो भने आमा र छोरालाई देखिँदा सङ्क्रमितका श्रीमतीमा भेटिएन । नेपालमा अरु थुप्रै परिवारका यस्ता उदाहरणहरु छन् । कोरोना सर्नका लागि धेरै संयोगहरु मिल्नुपर्छ ।
सङ्क्रमितले छुँदैमा वा छोटो समय कुरा गर्दैमा कोरोना सर्दैन
कोरोना सङ्क्रमण भएको व्यक्तिसँग बोल्दैमा वा उनीसँग छोटो समय बस्दैमा कोरोना सर्दैन । संसारभरका अस्पतालहरुको घटनाक्रम नै हेर्ने हो भने इटलीलगायत युरोपेली देशमा पीपीई र मास्कविना नै चिकित्सक उपचारमा खटिए तर उनीहरुमध्ये धेरैलाई सङ्क्रमण नै भएन ।
अध्ययन अनुसार एक मिनेट बोल्दा एक सय वटा भाइरस शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । १० मिनेटभन्दा धेरै पटक लगातार त्यसरी नै बोलिरहने हो भने एक हजारभन्दा धेरै भाइरस बाहिर निस्कन्छ । एक हजारभन्दा धेरै भाइरस हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्यो भने हाम्रो शरीरमा आक्रमण गर्न सक्छ ।
हामीकहाँ कोरोना सङ्क्रमितसँग छुन र बोल्न नै नहुने भन्ने छ । त्यो गलत हो । दुरी कायम गरी छोटो समय कुरा गर्दा भाइरस सर्दैन । यसो भन्दैमा सतर्क नै नहुने भन्ने हुँदैन । तर छुन नै नहुने र छोटो समय कुरा नै गर्न नहुने भन्ने चाहिँ होइन ।
इम्युनिटी पावरदेखि अरु धेरै फ्याक्टरको संयोग मिलेपछि मात्रै कोरोनाको सङ्क्रमण देखिने हो । अनावश्यक डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन । केही विधि अपनाउने र आत्मबल बढाउने हो भने यो त्यस्तो खतरनाक भाइरस होइन । यसलाई सजिलै जित्न सकिन्छ ।
विना लक्षणका मान्छे पनि सङ्क्रमित हुन सक्छन्
कुनै व्यक्तिमा रोगको कुनै लक्षण नै छैन भने पनि उसमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन सक्छ । सुरुमा चीनको वुहानमा सामान्य खालका लक्षणहरु मात्रै देखिएका थिए । १०२ भन्दा धेरै ज्वरो आउने, सुख्खा र लहरे किसिमको खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुनेलगायत लक्षण देखिएको थियो । युरोपेली देशमा सङ्क्रमण पुग्दा पखाला लाग्ने, बान्ता हुनेलगायत लक्षण देखिन थाल्यो । अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै खोकी लाग्ने र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएकोले भयावह बनेको हो । यसले ठाउँअनुसार लक्षण परिवर्तन गरिरहेको छ । तर नेपाल आइपुग्दासम्म लक्षण नै नदेखिएका व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन् ।
लक्षणसहितको भयो भने अरु मानिससँग त्यो मान्छे सम्पर्कमा जाँदैन र धेरैमा सङ्क्रमण नसर्न सक्छ । तर नजिकैको मान्छेलाई यसको सङ्क्रमण तत्काल सर्न सक्छ । लक्षण नै नभएका मान्छेहरु अरु व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहन सक्ने भएकाले यसले चाँडै सार्न सक्ने तर लक्षण नभएकाले छिटो सार्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । लक्षण भएका व्यक्ति र लक्षण नभएका व्यक्ति दुवैबाट उत्तिकै सङ्क्रमणको सम्भावना हुन सक्छ ।
८५ प्रतिशत कोरोना सङ्क्रमित आफै निको हुन्छन्
नेपालमा कतिपय व्यक्तिमा सङ्क्रमण भइ सकेर पनि निको भइ सकेको हुन सक्छ । सबैको परीक्षण नगरिएको अवस्थामा धेरै व्यक्तिले यो सङ्क्रमण पेलिसकेको वा जितिसकेको हुन सक्छ । यसबाट सङ्क्रमितमध्ये ८५ प्रतिशत बिरामी आफै निको हुन्छन् । बाँकी १५ प्रतिशतमध्ये आधा बिरामी आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ भने आधा बिरामी चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका देखिन सक्छन् । हामीले हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउने हो भने पनि यसलाई सजिलै जित्न सकिन्छ । सामान्य अवस्थाका बिरामीले घरमै बसेर केही विधि अपनाएमा यसलाई जित्न सक्ने खालको सङ्क्रमण हो यो । यसबाट अनावश्यक आत्तिनुहुँदैन ।
सबै सङ्क्रमित अस्पताल जानुपर्दैन
अहिले नेपालमा अरु देशको तुलनामा धेरै सङ्क्रमित छैनन् । त्यसैले सङ्क्रमण हुनेबित्तिकै अस्पतालको आइसोलेशनमा राख्ने गरिएको छ । तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्यधिक बढ्यो भने अस्पतालमा राख्ने ठाउँ नै हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सामान्य कोरोना सङ्क्रमितले घरमै बसेर पनि कोरोलाई जित्न सक्छन् । सङ्क्रमण फैलिएका अरु देशले पनि कोरोना पोजेटिभ देखियो भने उसलाई घरमै राख्ने र आवश्यक विधि अपनाउन लगाउने गरिएको छ ।
होम आइसोलेशनमा बस्न भनिएको हुन्छ । सङ्क्रमितको नियमित परीक्षण गर्ने र आवश्यक विधि अपनाइयो भने सङ्क्रमित व्यक्ति घरमै बसेर पनि निको हुन सक्छन् । कोरोना सङ्क्रमितको घरमा बस्दा छुट्टै सामान प्रयोग गर्ने, आफूले खाएका भाँडाहरु आफै माझ्ने, दुरी कायम गर्नेलगायत गरियो भने निको हुन अस्पताल नै जानुपर्ने भन्ने होइन ।
सङ्क्रमितलाई लक्षणहरु धेरै देखिन थाल्यो, सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो भने चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्छ । नत्र सामान्य तर सङ्क्रमित छ भने ऊ अस्पतालमा गएर झन् बिरामी हुने मात्रै हो । घरमै बसेर पनि सङ्क्रमितले कोरोनालाई जित्न सक्छन् । सङ्क्रमितमध्ये ८५ प्रतिशतले घरमै बसेर कोरोना जित्न सक्ने थुप्रै आधारहरु छन् ।
एक सङ्क्रमितले औसतमा अरु ३ जनालाई सङ्क्रमित बनाउन सक्छ
चीनमा कोरोनाको सङ्क्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको समयमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार एक सङ्क्रमित मान्छेले पाँचदेखि सात जनासम्म सङ्क्रमण फैल्याउन सक्ने पत्ता लागेको थियो । अरु देशमा अध्ययन गर्दा एक व्यक्तिले दुईदेखि पाँच जनासम्मलाई सङ्क्रमण सारेको देखियो । यसरी हेर्दा एक व्यक्तिले औसतमा तीन जनालाई मात्रै सङ्क्रमण सार्न सक्छ । उसो भए केही देशमा भयावहको अवस्था किन आयो त ? भन्ने प्रश्न उठ्न पनि सक्छन् । सङ्क्रमित व्यक्तिको कति जनासँग भेटघाट भयो, कति समयसम्म घुलमिल भयो भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ । यदि सङ्क्रमित व्यक्ति खोक्दै र हाच्छ्युँ गर्दै भिडभाडमा हिँडेको छ भने उसले सयौँ जनालाई पनि सार्न सक्छ । तर कन्ट्रयाक ट्रेसिङको आधार मानेर हेर्ने हो भने सामान्य अवस्थामा औसत तीन जनालाई मात्रै सङ्क्रमण सारेको देखिएको छ ।
सङ्क्रमित निको भएर घरमा सिधै घुलमिल हुन सक्छन् ?
कोरोना निको भएको मान्छे सिधै घरमा बस्न दिने गरिएको अभ्यास विश्वभर नै छैन । सिधै परिवार र समाजमा घुलमिल हुन दिइएको अभ्यास अहिलेसम्म पाइएको छैन । उसँग अझै कोरोनाका केही अवशेष हुन सक्ने भएकोले त्यस्तो गर्न हुँदैन । सामान्यतया अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि कम्तीमा १५ दिन छुट्टै क्वरेण्टीनमा बस्नुपर्छ । निको भएर घर फर्किएको १५ दिनसम्म छुट्टै बसेपछि चाहिँ त्यो व्यक्ति सबैसँग घुलमिल हुँदा फरक पर्दैन । किनभने ऊ अरु व्यक्तिसरह भइसकेको हुन्छ ।
हावाबाट कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदैन
हावाबाट सङ्क्रमण फैलिँदैन । खोक्दा, हाच्छ्युँ गर्दा, सास फेर्दा, बोल्दा, थुक उछिटिँदा, नाक र मुखबाट धेरै कणहरु बाहिर निस्कन्छन् । ती कणहरु चार नानोमिटर साइजभन्दा थोरै ठूलो हुन्छ । बिरामी जहाँ बसेको छ, त्यो ठाउँमा बोल्दा गह्रौँ कणहरु त्यहीँ खस्छ । हलुका कणहरु ६ फिटसम्म पुग्छन् । कणबाहिर निस्किएकै बेलामा हावा आयो, पङ्खा चलाइएको छ भने बढीमा १० फिटसम्म पुग्न सक्छन् । अहिलेसम्म एकदमै टाढा भनेको यो भाइरस १४ फिटसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
त्यसमा पनि कोठाभित्र ६ फिट र कोठाबाहिर ६ फिटमा सङ्क्रमण पुग्नुमा चाहिँ कोठाभित्र फैलिने सक्ने डर बढी हुन्छ । सङ्क्रमितले कोठाभित्र बसेर खोक्यो, हाच्छ्युँ गर्यो भने भाइरस दुई घण्टासम्म रहन सक्छ । तर घरबाहिर छ भने भाइरस खुला ठाउँमा लामो समयसम्म रहन सक्दैन । हावाको माध्यमबाट एकबाट अर्कोमा सर्ने भन्ने पटक्कै हुँदै हुँदैन ।
लामखुट्टे, झिँगालगायतबाट सर्दैन
अहिलेसम्म लामखुट्टे, झिँगालगायतबाट सङ्क्रमण सरेको भन्ने प्रमाणित भइसकेको छैन र सर्दैन पनि । यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा श्वासमार्फत मात्रै सर्ने भाइरस हो । अहिले हामीले जति सतर्कता अपनाइरहेका छौँ, त्यति धेरै सतर्क हुनुपर्ने र डराउनुपर्ने जरुरी नै छैन । साबुनपानीले हात धुने, मास्क लगाउने, सुकाएर अथवा अलि धेरै सफा गरेर खाने गरिरहेकै छौँ । घरभित्रै बस्ने र सामान्य सतर्कता अपनाउने हो भने यो त्यस्तो खतरनाक भाइरस होइन । खानेकुराहरुबाट पनि त्यति सर्ने सम्भावना हुँदैन । लामखुट्टे र झिँगाको कारण यो सङ्क्रमण सर्दैन, ढुक्क भए हुन्छ ।
औषधि नै पत्ता नलागेको सङ्क्रमणबाट कसरी निको भइरहेका छन् ?
८५ प्रतिशत सङ्क्रमितलाई त्यस्तो धेरै उपचार नै गर्नुपर्दैन । आफैँ निको हुन्छन् । बाँकी रहेको १५ प्रतिशतमा पनि सात प्रतिशत अस्पताल भर्ना भएर सामान्य औषधि प्रयोग गर्ने र नियमित जस्तै गरी खाना खाने गरेर कोरोनालाई जितिरहेका छन् । जस्तो कि कसैलाई ज्वरो आएको छ भने उसले ज्वरोको औषधि खाएर नै कोरोनालाई जित्ने हो । कसैलाई खोकी लागेको छ भने खोकीको औषधि खाएर नै कोरोनालाई पराजय गराउने हो ।
बाँकी रहेको सातदेखि आठ प्रतिशतलाई आईसीयू, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ । आईसीयू र भेन्टिलेटरमा बसेको मान्छेमा पनि आधालाई सञ्चो हुन्छ र आधाको ज्यान जान सक्छ । यसको मृत्युदर एकदमै कम छ । अहिले जसरी अफवाह फैलिएको छ, त्यसरी आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन । यसको मृत्युदर एकदमै कम छ । त्यसो भन्दैमा सामान्य विधिलाई अपनाउन छाड्नु हुँदैन । दुरी कायम गरियो भने यो भाइरस हाम्रो शरीरमा छिर्न पाउँदैन ।
लकडाउन अनिश्चितकालीन बनाउन पर्दैन
अहिले जति पनि कोरोना सङ्क्रमितहरु भारतसँगको सम्पर्कबाट आएको देखिन्छ । अहिलेको लकडाउनलाई १५ दिनसम्म शतप्रतिशत बनाउने हो भने यो अवधिमा सामान्य सङ्क्रमित आफै निको हुनेछन् र अरु गम्भीर खालकाहरु आफै अस्पताल पुग्नेछन् । परीक्षणको दायरा बढाएर १५ दिन शतप्रतिशत लकडाउन गर्ने हो भने अवस्था धेरै नै सामान्यीकरण हुनेछ । सधंँभरि यसरी नै लकडाउन मात्रै गरिराख्ने कुरा सम्भव नहुन पनि सक्छ । तर भारतसँगको नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ । दक्षिणबाट भाइरस नछिरेको भए नेपालमा यो सङ्क्रमणको कुनै पनि सम्भावना नै थिएन ।
कोरोना हामीले सोचेजस्तो खतरनाक हैन
जुनसुकै रोग पनि विश्वव्यापी भयो अथवा धेरै भाउ पायो भने झन् शक्तिशाली हुँदै जान्छ । कोरोनाको सङ्क्रमणले पनि आवश्यकताभन्दा धेरै भाउ पाइरहेको छ । कोरोना भाइरस हामीले सोचेजस्तो खतरनाक हैन । सार्स, इबोला, मर्सलगायतको सङ्क्रमण हेर्ने हो भने त्यो सङ्क्रमणका कारण मृत्युदर निक्कै उच्च थियो । तर कोरोना लागेपछि यसको सङ्क्रमण दर बढीमा तीन प्रतिशत मात्रै हो । कुनै देशमा त योभन्दा पनि कम मृत्युदर पाइएको छ । कतिपय ठाउँमा शून्य दशमलव २ प्रतिशत सङ्क्रमितको मात्रै ज्यान गएको छ । यसले तयारी गर्ने समय दिन्छ, स्वास्थ्य उपचार गर्ने समय दिन्छ । यसलाई त्यति धेरै घातकको रुपमा लिन मिल्दैन ।
कोरोना भाइरस घातक होइन भन्दैमा जे–जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भन्न खोजेको होइन । केही विधि र सावधानी अपनाउने हो भने यो कोरोनालाई सामान्य रुपमै जित्न सक्छौँ भन्न खोजिएको हो । मुख्यतयाः हातलाई एक दिनमा ९० पटकभन्दा धेरै पटक मुख र नाकमा लगिरहेका हुन्छौँ । सङ्क्रमण हाम्रो हातबाट सर्ने या हुने हो । सामान किन्दा, केही सामान चलाउँदा अथवा केही काम गर्दा हातमा सङ्क्रमण आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । हामीले हातले नाक र मुखमा छुने बानीलाई त्याग्नुपर्यो ।
पटक–पटक साबुन पानीले हात धोइरहनुपर्‍याे । सकभर घरभित्रै बस्नुपर्‍याे । बाहिर निस्कनै परे मास्क, पञ्जा, ग्लोब्सहरु लगाउने गर्नुपर्‍याे । घर फर्किएपछि बाहिरी पोसाकहरु बाहिर नै राख्ने, मास्कहरुलाई बाहिरै खाल्डो खनेर पुर्ने, नुहाएर घरभित्रै बस्ने, हरेक व्यक्तिसँग ६ फिटको दुरी कायम गर्नेलगायत केही सतर्कता अपनाइयो भने यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हतपती सर्दैन । सजग र सतर्क रहौँ, अनावश्यक डराउनु पर्दैन ।
(जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रवीन्द्र पाण्डेसँग टेकमान शाक्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)
उज्यालाे अनलाइनबाट जस्ताकाे तस्तै साभार